Sida Loo Iibiyo Baabuurkaaga Craigslist Iyadoo Aan La Isdabamarin - Goobta Hantida
Bogga ugu weyn Sida Loogu Iibiyo Baabuurkaaga Craigslist Iyadoon La Isdabamarin
Sida Loogu Iibiyo Baabuurkaaga Craigslist Iyadoon La Isdabamarin
Isha Sawirka: cnbc.com
Iyada oo in ka badan 60 milyan oo qof ay adeegsadaan Craigslist bil kasta, waxaa jira khiyaanooyin kala duwan oo aad ku dhici karto.
Tani waxay ka koobnaan kartaa qorshayaasha dambiyada ee adag ilaa dhacdooyinka asaasiga ah sida soo -iibsadaha mustaqbalka ee ku ghosting iyo ku -guul -darreysiga inaad soo bandhigto si aad u iibsato waxaad iibineyso.
Waa inaad isticmaashaa taxaddar aad u badan intaad ku iibinta baabuurka Craigslist. Si ka duwan iibinta baaskiil duug ah ama alaab guri oo kale, tani waxay noqon kartaa macaamil lacageed oo la taaban karo.
Waxaad doonaysaa inaad naftaada iyo gaadhigaaga ka badbaadiso cid kasta oo isku dayda inay ka faa'iidaysato.
Baadhid: 21 Goobo sharci ah sida Craigslist si aad u iibsato oo aad u iibiso alaabada la adeegsaday 2021
Talooyin aad maskaxda ku hayso si ay kuu ilaaliyaan marka aad baabuur ku iibineyso Craigslist
Waa inaadan ammaankaaga halis gelin si aad baabuurkaaga ugu iibiso Craigslist. Halkan waxaa ah dhowr xeeladood oo kaa caawinaya ilaalintaada.
1. Ilaalinta badbaadada adiga iyo gaadhigaaga
U -oggolaanshaha dadka aan la garanayn inay tijaabiyaan baabuurkaaga ayaa laga yaabaa inay ku dejiso. Ka warran haddaad u oggolaato inay keligood kaxeeyaan, oo aanay soo celin baabuurkaaga?
Yaa, dhanka kale, raba inuu baabuur la galo qof aan la garanayn?
Markaad qof kula kulmeyso waditaan tijaabo ah, waxaa jira dhowr waxyaalood oo aad sameyn kartid si aad u ilaaliso naftaada iyo gaarigaaga.
Ku casuun saaxiibkaa: Ka fogow inaad la kulanto qof si aad imtixaan u wadid, gaar ahaan haddii aad damacsan tahay inaad raacdo.
Akhri Sidoo kale: Sidee Craigslist -ku Lacag Badan ku Helaa | 2021 Faahfaahin Buuxda
2. Ilaalinta boorsadaada
Yaree isdhexgalkaaga iibsadayaasha maxalliga ah ee aad qof ahaan ula kulmi karto, sida Craigslist soo jeedinayso. Jidka kale u orod haddii qof ka socda gobol kale isku dayo inuu lacag kuu soo diro. Waxaa laga yaabaa inaad la macaamilayso farshaxan yaqaan.
Xidhiidhka Maqaalka: Ma ku iibin kartaa baabuur liiska Craigslist? Hacks -ka fudud ee 2021 -ka
Markaad baabuur ku iibineyso Craigslist, waa maxay habka ugu nabdoon ee lacag -bixinta?
Nasiib darro, iibsadayaasha qaarkood waxay leeyihiin ujeedo xaasidnimo ah, waxaana laga yaabaa inaad noqoto dhibane dhibane. Natiijo ahaan, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso inaad aqbasho ikhtiyaarka lacag -bixinta oo adiga iyo boorsadaada ammaan ku haya xitaa ka dib markaad macsalaameysay gaarigaaga.
Artice la xiriira: Sida Loogu iibiyo Alaabta Guryaha Craigslist 2021 | Tusaha Khubarada
1. Bixinta Lacag caddaan ah
Markay timaado iibinta baabuurka, maahmaahda “lacag caddaan ah waa boqor!” weligeed kuma habboona. Oggolaanshaha lacag caddaan ah ee baabuurkaaga, guud ahaan, waa habka ugu ammaansan si loo hubiyo inaad hesho dhammaan, bixinta saxda ah.
Laakiin maskaxda ku hay in aqbalidda lacagta caddaanka ah ee iibsadaha ay kaaga tagi doonto boorsadaada boqolaal ama laga yaabee kumanaan doolar, waxaadna u baahan doontaa inaad sida ugu dhakhsaha badan u tagto bangiga.
Ku -socodka lacag caddaan ah oo aad jeebka ku sidato waxay noqon kartaa khatar! Si aad taxaddar dheeraad ah u yeelatid, la kulan iibsadaha bangiga si aad isla markiiba lacag ugu shubto koontadaada.
Waa maxay habka ugu nabdoon ee loo helo lacag dirista iyada oo aan lagu khiyaanayn Craigslist?
1.) Baro wax badan oo ku saabsan Craigslist iyo adeegyada ay bixiso:
Haddii aad leedahay aqoon aasaasi ah oo ku saabsan Craigslist, waxaad ka fogaan kartaa khiyaanooyin badan. Kahor intaadan isticmaalin Craigslist, waqti qaado si aad u fahanto waxyaabaha soo socda:
• Cinwaanka mareegaha Craigslist waa http://www.craigslist.org (link is external).
• Dadka khiyaanada sameeya waxay si joogto ah u isticmaalaan mareegaha been abuurka ah si ay macaamiisha uga dhaadhiciyaan inay bixiyaan wax aan jirin.
• Laba jeer hubi URL-ka ka hor intaadan iibsan.
• Macaamil kasta oo ku jira Craigslist ma taageerto Craigslist. Waxaad la macaamileysaa khiyaano haddii aad hesho iimayl ama aad u soo bandhigto inaad iibiso waxaad ka iibsan kartaa ilaalin.
• Adeegga farriinta codka Craigslist ma jiro. Waxaad la macaamilaysaa qof khiyaameeya haddii qof codsado marin u hel ama weydii inuu hubiyo “Craigslist voicemails.”
2.) La shaqee dadka kale ee Xaafadaada:
In kasta oo sariirta “si dhif ah loo isticmaalo” ee iibinta gobollo ka yar laga yaabo inay ka qaalisan tahay midka lagu iibiyo 10 daqiiqo oo baabuur loo kaxeeyo, la macaamilka dadka deegaanka ee Craigslist badiyaa waa ammaan. Waxaad ka fogaan doontaa 99 boqolkiiba khiyaamooyinka Craigslist haddii aad raacdo xeerkan, sida ku cad tilmaamaha goobta ee ka hortagga khiyaamooyinka suuqooda.
Waxaad awoodi doontaa inaad si shaqsi ah u dhammaystirto iibinta haddii aad macaamilka ka dhigto mid maxalli ah. Waxaa sidoo kale jira khatar yar oo ah in caqabad luqadeed laga yaabo inay khalkhal galiso shuruudaha heshiiska.
3.) Ka hor intaadan wax iibsan, fiiri badeecada (yada):
Si aad u hesho faham buuxa oo ku saabsan waxa aad iibsaneyso, waligaa ha ku tiirsanaan sawirrada. Codso inaad aragto shayga qof ahaan.
Haddii aad iibsanayso shay koronto ama wax kale oo u baahan in la shaqeeyo si waxtar leh, hubi inaad hesho fursad aad ku tijaabiso.
4.) Ha aqbalin ama ha u dirin lacag bixinta jeegga khasnajiga, jeeg la xaqiijiyay, ama dalabka lacagta:
Hubinta khiyaamadu way adkaan kartaa in lala dagaallamo. Sidoo kale, sababtoo ah jeeg been abuur ah ayaa laga yaabaa inuu u muuqdo inuu dusha ka cad yahay, waxaad oggolaan kartaa macaamilka oo aad ka faa'iideysan kartaa lacagaha sida muuqata xisaabtaada ku jira.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad ogaan doontaa in jeeggu soo booday dhawr maalmood ka dib.
Waqtigaas ka dib, macmiilku wuxuu la cararay alaabtaada, wuxuuna kaaga tagay inaad daboosho doolarkii aad qarash gareysay adigoo rajaynaya inay caddaatay.
Dhinaca kale, haddii aad wax ku bixiso dalabka lacagta ama wareejinta siligga, ma awoodi doontid inaad lacagtaadii dib u hesho haddii iibiyaha uusan soo gudbin alaabta.
5.) Lacag caddaan ah Isticmaal:
Lacag caddaan ah ayaa ah habka ugu nabdoon ee lagu bixin karo ama loogu ururin karo lacagaha macaamilka Craigslist.
Haddii fikirka ah inaad lacag aad u badan siisid qof aadan garanayn ay kaa dhigto mid walaac leh, waxaad ku beddeli kartaa lacag iyo alaab meel aamin ah sida saldhigga booliiska ee xaafaddaada ama bangiga.
Soo qaado qalin wax lagu baadho oo been abuur ah (oo laga heli karo inta badan dukaamada sahayda xafiisyada iyo intarneedka) inta aad lacag kaash u ururineyso si aad u hubiso inaan lagu khiyaanayn biilasha been abuurka ah.
Kuwani waxaa laga yaabaa in lagu iibsado wax ka yar $ 5, laakiin waxay ku badbaadin karaan lacag aad u badan.
6.) Marna ha siinin iibsadaha ama iibiyaha macluumaadkaaga shaqsiyeed:
Had iyo jeer astur macluumaadkaaga marka aad isticmaalaysid internetka.
Lambarka koontadaada bangiga, taariikhda dhalashada, ama xitaa magaca hooyadaa ee hooyada ah kuma xirna iibsadaha ama iibiyaha. Ka noqoshada ganacsiga haddii xiriirku ku weydiinayo weydiimo aad u badan.
7.) Ka digtoonow Shabakadaha Adeegga Bogus Escrow:
Markaad wax ku iibsanayso oo ku iibinayso internetka, adeegyada raaca, oo ay shirkaddu ku hayso lacag aad u tiro badan labada dhinac dhexda macaamilka, waxay noqon kartaa mid aad waxtar u leh.
Waxay, si kastaba ha ahaatee, u noqon karaan dabin khiyaano ah dhibbaneyaasha aan ogayn. Khayaanada ayaa si joogto ah u sameeya shabakado adeegyo qarsoodi ah si ay u khiyaaneeyaan dhibbanayaasha si ay u dhiibaan lacagtooda.
Goobtu waxay noqon doontaa mid ka dillaacda websaytka adeegga raaca oo sharci ah, oo ay ku jiraan dhawr kala duwanaansho yar oo aadan ogaan doonin haddii aadan raadineyn.
Halkii aad ka raaci lahayd xayeysiiska soo-baxa ama isku-xirka, waxaa lagugula talinayaa inaad keligaa hesho goob adeeg-raac. Hubi in goobtu ka xor tahay khaladaadka higaada iyo khaladaadka naxwaha. Sidoo kale, laba jeer hubi in URL-ku yahay mid nabdoon oo u dhigma shabakadda adeegga.
8.) Samee nambarka isticmaalka mar keliya:
Markaad ganacsi ku sameyneyso Craigslist, waxaad sidoo kale u baahan kartaa inaad wadaagto lambarka taleefanka shaqeeya. Halkii aad ku bixin lahayd lambarka taleefankaaga dhabta ah, waxaad ku abuuri kartaa lambar bilaash ah oo la tuuri karo Google Voice (link is external).
Lambarkaaga Codka Google wuxuu noqon doonaa mid aan la raadin karin ka dib 30 maalmood oo aan firfircoonayn wuxuuna dhacayaa
Markaan baabuur ku iibinayo Craigslist, maxaan maanka ku hayaa?
1. Dabeecadaha iibsadaha:
Heshiisku si fudud buu u socon doonaa haddii iibsadahaagu yahay mid dhab ah - oo macquul ah. Adigoon marin u helin keydadka FBI -da, sidee baad u hubin kartaa qofka wax iibsan kara?
Telefoonka kula hadal iibsadaha.
Dhagarqabayaal badan ayaa adeegsada xisaabaadka iimaylka ee qarsoon si ay u qariyaan aqoonsigooda oo aysan bixin macluumaad ku saabsan halka ay ku sugan yihiin.
Ka codso in macaamiishu ay ku siiyaan lambarada taleefanadooda oo ay qabsadaan wakhti aad ku hadasho; farshaxan -yahannadu si dhakhso leh ayay u baaba'aan.
Waa caadi in la is -weydaarsado farriimaha qoraalka ah ee ku saabsan iibsashada baabuur gacan labaad ah maalmahan laakiin ku adkeyso wicitaan taleefan oo degdeg ah.
U fiirso dareenkaaga mindhicirka inta aad la hadlaysid qofka wax iibsan kara. Sug macaamil kale haddii iibsaduhu sameeyo codsiyo yaab leh ama haddii wax kaa khaldan.
2. La soco lacagta:
Ku dhawaad ​​khiyaano kasta oo internetka ah waxay ku bilaabataa codsi maaliyadeed oo la yaab leh oo ka imanaya macaamilka. Qandaraaslaha been -abuurka ah wuxuu kuu soo qorayaa jeeg lacag dheeraad ah oo lagu raro baabuurka, sida ku cad khiyaanada caadiga ah. Waxaad bixinaysaa shixnad, baabuurka ayaa lagu keenaa, ka dibna jeeggaagu wuu boodboodaa.
Kahor intaadan qabanqaabin kulan, u caddee iibsadaha suurtagalka ah inaad kaliya aqbasho lacag caddaan ah. Haddii iibsaduhu ku adkeysto bixinta jeegga khasnajiga, ku kulan bangiga oo arag sida codsiga lacag -bixinta uu u maareeyo khasnaji.
3. Ha ku faraxsanayn:
Khiyaanooyin badan ayaa guuleysta sababtoo ah “hammiga dhibanaha oo ah inuu iska xiro heshiis ay u maleeyaan inuu macaan yahay.”
Markaa maskaxda ku hay in iibsadayaasha dhabta ahi ay su'aalo ka weydiin doonaan gaariga oo ay u badan tahay inay rabaan inay iska leexiyaan.
Haddii aad baabuurkaaga ka iibineyso qof ka baxsan magaalada, waxaad ka filan kartaa inay kireystaan ​​adeeg moobayl si ay u baaraan.
4. Ku soo ururi "aag nabdoon."
Waaxyada booliisku waxay samaynayaan “aag nabdoon” oo leh ilaalin fiidyow maadaama shaqsiyaad badani ay qabanqaabinayaan shirar dhab ah ka dib markay internetka dhexgalaan.
Kuwani waa goobo aad u fiican oo lagula kulmo kuwa wax iibsan kara. Waxaa la doorbidi karaa haddii iibiyaha uu doorto goobta kulanka.
“Adigoo ku adkeysanaya xeerarka asaasiga ah, waxaad ka saari kartaa waxyaabo badan oo aan la hubin isla xisaabta. Haddii aad dareento ammaan -darro oo aadan ahayn khabiir baabuur, soo kaxayso saaxiib. ”
Haddii aysan jirin aag nabdoon oo u dhow, ku kulan meel dadweyne oo aad u iftiimin leh oo leh dad badan. Haddii aad wax shaki ah qabtid, codso inaad aragto liisanka wadista iibsadaha ka hor intaadan u oggolaan isaga ama iyada inay kaxeeyaan baabuurkaaga.
5. Ka fogow iibsadayaasha leh sheekooyin badan oo ay sheegaan:
Shaqooyin badan oo la isku halleyn karo waxay ka bilaabmaan baahida kaalmada ama codsi aan caadi ahayn, sida in baabuur laga dhoofiyo dalka.
Khayaanada ayaa sidoo kale iska dhigay inay yihiin xubno ka tirsan milatariga si ay u kasbadaan naxariis iyo fikradaha waddaniyadda.
Codsiyada noocan oo kale ah waa in laga fogaadaa kharash kasta. Hoos u dhig, weydii su'aalo, iskana ilaali inaad si caadifad leh ugu xirnaato macaamilka.
Craigslist, waa maxay habka ugu dhaqsiyaha badan ee lagu iibiyo baabuur?
Craigslist wuxuu caan ku yahay kala duwanaanshaha midabada leh ee xayeysiiska, oo u dhexeeya taargooyin kulul ilaa taariikho kulul.
Waa ikhtiyaar caadi u ah iibsashada degdegga ah iyo iibinta, oo aan ugu yaraan ahayn baabuur, sababtuna waa qaabkeeda xorta ah oo deg -degga ah. Waa kuwan talooyin kaa caawinaya inaad si dhaqso ah u iibiso gaarigaaga.
Ku dar sawirro:
Haddii aad ku darto sawirro iyo haddii kale, dhejinta Craigslist waa bilaash. Iibsadaha suurtagalka ah ayaa had iyo jeer iska indho tiri kara xayeysiisyada aan lahayn sawirro.
Ku dar dhowr xayeysiiska oo u diyaar garow inaad wax badan siiso qof kasta oo danaynaya.
Cinwaanka, ku dar sannadka, samaynta, moodeelka, iyo masaafada:
Craigslist waa bad iskuxirayaal, sidaa darteedna ay ku jiraan macluumaadkaas muhiimka ah kaliya maahan in boostadaadu u ekaato mid dhammaystiran, laakiin waxay sidoo kale u sahlaysaa iibsadayaasha inay helaan.
Sidoo kale ku dar qoraalka, samaynta, iyo qaabka gaadhiga. Ka gudub macluumaadka muhiimka ah, sida akhrinta odometer -ka, cabbirka mishiinka, xulashooyinka ugu waaweyn, iyo gudbinta.
Xaaladda dambe, qaar ka mid ah iibsadayaasha ayaa iska indho -tiri doona haddii aadan cayimin haddii ay rabaan buug -gacmeed ama gudbinta otomaatiga ah. Ugu dambayntii, hubso in wax walba si sax ah loo higgaadiyo.
Haddii aad kor u qaaddo “Infinity,” kuwa geliya “Infiniti” sanduuqa raadinta marna kuuma ogaanayaan.
Sheekada nolosha waa laga boodi karaa:
Waxaa jira sabab uu qof u iibiyo baabuur. Micnaheedu maaha in dhammaan riwaayaddu ay tahay in la muujiyo. Iibsadayaashu waxay ka niyad -jabsan yihiin inay la xiriiraan ganacsatada sababta oo ah buuqaas oo kale.
Halkii, ku soo koob dayactirka ama dayactirka erayadaada. Wax dheh haddii baabuurku u baahan yahay ama u baahan yahay fiiro gaar ah.
Waa wax sax ah in la sameeyo, macaamiisha Craigslist -na waxaa loo adeegsadaa iibsadayaasha baabuurta kuwaas oo fahamsan in inta badan dhinacyada gaarka loo leeyahay ay isticmaaleen baabuur kuma jiraan xaalad qolka bandhigga.
Xiriiro badan waa in lagu daraa:
Ugu yaraan, waxaad isticmaali kartaa astaamaha la dhisay si aad u hesho jawaabaha iimaylka qarsoodiga ah ee xayeysiiskaaga. Taasi waxay noqon doontaa mid aan quseyn isla marka aad ka jawaabto emayl.
Ku dar siyaabo kala duwan oo iibsadayaashu kula soo xiriiraan, sida iimaylka, qoraalka, iyo taleefanka - haddii aad u baahatid, iska qor lambarka qarsoon ee Google Voice.
Si joogto ah u fiiri galkaaga spam si aad u hesho farriimaha ka imanaya dhinacyada sharciga ah ee sida khaldan loo leexiyay. Ka jawaab su'aalaha marka ay soo galaan, ama sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.
Iibsadayaashu waxay eegaan xayeysiisyo badan, markaa maskaxda ku hay. Lacagtooda yaanay khasaarin.
Ereyada muhiimka ah waa in lagu daraa:
Haddii gaarigaagu leeyahay astaamo la magacaabay, ha iska indha tirin ama ha ugu yeerin wax guud. Halkii aad ka dhihi lahayd waa Mercedes oo dhan-wheel-drive, dheh “4MATIC.”
Wax dheh haddii shaygu leeyahay HEMI. Kuwani waa noocyada ereyada muhiimka ah ee soo jiita dareenkaaga boostadaada, gaar ahaan marka dadku raadsadaan shuruudahaas.
Samee Qiimo Macquul ah:
Markaad u isticmaasho Craigslist inaad si dhaqso leh u iibiso baabuurkaaga, hubaal ma heli doontid doollarka ugu sarreeya. Dib -u -noqoshada deg -degga ah waxay ku imaanaysaa kharash.
Tixgeli qiimo ka sii rafcaan badan halkan, sida laguugu dhiirigelinayo inaad qabato shaqada guriga kahor intaadan gaarigaaga ku iibin hab kale.
Markaad go'aaminayso baarka, maskaxda ku hay qiimaynta baabuurta kale ee adiga la mid ah.
Ha noqon mid aan macquul ahayn:
Kahor intaadan xitaa dhammayn akhrinta xayeysiiska Craigslist, waxaad shaki la'aan aragtay kuwa diida inay wada xaajoodaan ama haddii kale niyad jabiyaan is -dhexgalka.
Dejinta qiime go'an iyo tilmaamaha xiriirka ayaa laga yaabaa inay keento luminta dhowr qof oo wax iibsan kara, laakiin dhammaantood ma aha wax laga naxo.
Adigu ma eedayn kartid naftaada haddii aadan rabin dalabyada kubbadda kolayga oo la sameeyo wixii ka dambeeya saqda dhexe. Si fudud u sharax si aan u kala fogeyn dadka caqliga leh ee gacanta ku haysta lacag caddaan ah.
Sida Loo Iibiyo Baabuurka Liiska Craiglist Iyadoon La Isdabamarin
Xitaa haddii ay u muuqato in qof kasta oo ku jira Craigslist uu isku dayayo inuu ku helo, tani had iyo jeer ma aha kiiska. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad taxaddar muujisaa.
Si aad uga fogaato khasaare weyn, waa inaad marka hore ilaalisaa naftaada. Haddii aad fiiro gaar ah siiso, si fudud ayaad uga baxsan kartaa khiyaanooyinka qaar.
Waxa kaliya oo aad sameyn kartid waqtiyada qaarkood waa inaad ku kalsoonaato dareenkaaga oo aad u rajeysaa wanaag. Markay timaaddo xajiinta, tusaale ahaan, waxa kaliya ee aad samayn kartaa waa inaad la samaysato xidhiidh qof kale si loo go'aamiyo inay danaynayaan oo la aamini karo ka hor intaadan oggolaan inay la kulmaan.
Haddii aadan doonaynin inuu ku iibsado ruux wax iibsaday, u dir dhawr qoraal marka hore si aad u baratid. Haddii aysan danaynayn inay hadlaan wax badan, waxaa laga yaabaa inaad halis gasho.
Iska yaree waqtiga aad ku bixinayso adiga oo u imanaya inay kuu yimaadaan halkii aad si kale uga heli lahayd.
Si taas loo gaaro, hoos waxaa ku yaal tallaabooyin ama tilmaamo la raaco:
U diyaargarow waxa ugu xun adiga oo rajaynaya waxa ugu fiican:
Ku noolaanshaha noloshaada sida in qof walba doonayo inuu khiyaaneeyo waxaad u ekaan kartaa rajo -xumo, laakiin Craigslist, tani caadi ahaan waa habka ugu wanaagsan ee loo wajaho heshiis kasta.
U soo dhowaada wada -hadal kasta adoo u malaynaya in shaqsiga kaala soo xiriiraya gaarigaaga uu isku dayayo inuu ku khiyaaneeyo. Tani waxay kugu hayn doontaa feejignaan iyo ka warhayn wax kasta oo aan caadi ahayn.
Raadi calaamadaha digniinta:
Farshaxanno badan oo la halgama ayaa ah kuwa dabacsan. Waa inay la kulmaan dad badan ka hor intaanay helin mid qaniinaysa. Taas micnaheedu waa inay ujeedadoodu tahay inay lacag kaydiyaan mar kasta oo ay suurtogal tahay.
Dhagar-qabayaal badan ayaa si is-weydaarsi ah u soo diri doona isgaarsiinta goynta iyo dhejinta iyaga oo rajaynaya in qof ku dhici doono. Raadi farriimo aan macno samaynayn marka la eego xayeysiiskii ay ka jawaabeen.
Isha ku hay sidoo kale dhibaatooyinka naxwaha iyo habdhiska.
Khiyaanooyin badan oo Craigslist ayaa ka yimid meel ka baxsan Mareykanka. Isgaarsiintooda ayaa laga yaabaa inay soo martay barnaamij turjumaad, taas oo laga yaabo inay ku wareerto oo ay garwaaqsato.
Codso lambarka taleefanka:
Haddii aad haysato iibsade dhab ah, waa inaysan ka walwalin inay kula hadlaan si furan.
Xor ayaad u tahay inaad isticmaasho farriinta Craigslist haddii aad iibinayso dhalooyin Coke oo duug ah. Baabuurka, in kastoo, waa inaad marka hore telefoonka ku maqashaa cod run ah oo aadanaha ah.
Haddii iibsaduhu diido inuu ku siiyo lambarka taleefanka, ama haddii ay rabaan inay ku soo wacaan oo lambarku u muuqdo mid gaar ah ama la xanibay, taasi sidoo kale waa calan weyn oo cas.
Haddii aad hesho lambar taleefan, raadi koodhka aagga si aad u ogaato meesha ay ka soo wacayaan.
Weydii su'aalo muhiim ah:
Tani waxay la xiriirtaa dooddii qaybtii hore ee farriimaha goynta iyo dhejinta.
Waxaa laga yaabaa inaad la macaamilayso qof si fudud u goynaya oo dhejinaya qaybtooda wada -hadalka haddii aad weydiiso dhawr su'aalood oo aadan helin jawaab toosan.
Faham sida lacag laguu siiyo:
Lacag caddaan ah ayaa boqor ku ah Craigslist badeecooyinka tikidhada waaweyn sida baabuurta. Ku adkee in lacag caddaan ah lagu siiyo hab kasta oo kale.
Si fudud uma qalantid halista haddii iibsaduhu doonayo inuu kugu bixiyo wareejinta siligga ama jeeg shaqsiyeed.
Waxaa jiri kara sababo ansax ah oo iibsadaha uusan awoodin inuu ku siiyo lacag caddaan ah xilligan. Haddii ay sidaas tahay, waa inaad isticmaashaa taxaddar aad u daran.
Marka hore, hel dareenka qofka si aad u go'aamiso haddii aad u malaynayso inaad iyaga aamini karto. Xitaa haddii aad diyaar u tahay inaad fursad qaadato, waa inaad ka fogaataa jeegagga iyo wareejinta siligga kharash kasta.
Tixgeli inaad isticmaasho hab kale oo lacag -bixin ah, sida qabyo -qoraalka bangiga, kaasoo bixinaya xoogaa hubin ah in lacagtu dhab tahay.
Dadka khiyaanada badan waxay had iyo jeer raadiyaan iibiyayaal u muuqda kuwo aan caqli lahayn ama aan war ka hayn waxay haystaan.
Hubi in xayeysiiskaagu si fiican u qoran yahay, cad yahay, oo kooban yahay, iyo in uu hayo dhammaan macluumaadka farsamo ee iibsadaha iman kara u baahan yahay. Sidoo kale, ku dar sawirro cad.
Sida xushmadda badan ee xayeysiiskaagu u muuqdo, ayaa macaamiisha aad u daran u soo jiidan doontaa.
Haddii aad si fudud ugu dhejiso wax sida “gaadiid iib ah, si fiican u socda,” khiyaamo badan ayaa ku soo qulqulaya, laakiin iibsadayaasha sharciga ah ayaa iska indho tiraya maxaa yeelay waxay bixisaa macluumaad yar oo ku saabsan waxaad haysato.
Kulanka qof ahaaneed:
Kani waa xeer aad u fiican oo la raaco marka lala kulmayo qof onlayn ah. La kulan iyaga qof ahaan, dharaar cad, iyo dadweyne.
Markaad tan samayso, waa inaad had iyo jeer keentaa wehel. Oggolow inaad ku kulanto Starbucks ama, si ka sii fiican, bangiga laga yaabo in macaamilka maaliyadeed la dhammeeyo.
Haddii baabuurkaaga lagu iibiyo lacag aad u badan, bangigu waa meel ku habboon in lagu kulmo.
Haddii bixinta lacag caddaan ah aysan ahayn ikhtiyaar, waxaad u raaci kartaa bangiga iibsadaha bangiga oo fiiri iyaga oo hortaada ka helaya jeeg la xaqiijiyay, kaas oo aad baari kartid si aad u hubiso inay dhab tahay.
Ku kalsoonow dareenkaaga:
Dhammaadka maalinta, ma jirto hab nacasnimo leh oo lagu ogaanayo fannaaniiste. Waa inaad ku kalsoonaataa dareenkaaga oo aad sii wadataa waxa u muuqda sax.
Kaliya ogow inay suurtogal tahay in la khiyaameeyo ay jirto, oo ka digtoonow calaamadaha in wax aan caadi ahayn ay dhacayaan.
Ma runbaa inaan weli mas'uul ka ahay baabuur ka dib markaan iibiyo?
Gobollada badankood waxay u tixgeliyaan macaamilka baabuurta la adeegsado inay yihiin “sida ay tahay”. Tani waxay tilmaamaysaa in macmiilku fahmay in haddii wax qaldamaan ka dib marka baabuurka la kaxeeyo, isaga ama iyada ay keligeed masuul ka tahay. Taasi waxay ka dhigan tahay inaadan la xisaabtamin gaariga marka loo iibiyo sidii iibiye.
Markaad baabuur si gaar ah u iibinayso, waa maxay waraaqaha loo baahan yahay?
Marka hore, labada dhinacba waa inay buuxiyaan oo saxeexaan Xeerka Iibinta oo ay ku jiraan VIN, qiimaha wax lagu iibsaday ee la isku raacay, akhrinta odometer-ka, iyo magacyada iyo cinwaanada iibsadaha iyo iibiyaha. Intaa ka dib, iibsaduhu waa inuu daryeelaa bixinta.
Muxuu samayn karaa farshaxan -yaqaanku lambarka aqoonsiga gaadhiga (VIN)?
Sababtoo ah VIN -ku wuxuu ku yaallaa muraayadda hore, qof walba wuu dhaafi karaa baabuurkaaga oo wuu koobi karaa. Waxay codsan karaan waraaqo nuqul ah ka dib markay qoreen VIN -kaaga, waraaqahaasna waxaa loo adeegsan karaa baabuur kale oo la xaday ama dib loo abuuray.
Craigslist ma tahay meel ammaan ah oo lagu iibiyo baabuur?
"Haa," waa jawaabta tooska ah. Waxaad ku iibin kartaa baabuurkaaga aad isticmaashay Craigslist si kalsooni leh. Iibsadayaasha iyo iibiyeyaasha gaarka ah, iyo sidoo kale kuwa wax iibiya, ayaa soo noqnoqda mareegaha. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad si taxaddar leh u socotaa. Dad badan ayaa ka labalabeeya inay ku iibiyaan ama ku iibsadaan baabuurta Craigslist.
Suuragal ma tahay in la khiyaameeyo inta baabuur la iibinayo?
In kasta oo tani aysan had iyo jeer ahayn kiiska, ku iibinta iibiyaha jeeg been abuur ah ama amar lacag waa khiyaano caan ah. Haddii aad saxeexdo cinwaanka ka hor intaan lacagta la nadiifin, baabuurku adigu ma aha adigu, oo si hufan ayaad u siisay lacag la'aan.
Dad badan ayaa waayo -aragnimo weyn u leh iibinta baabuurtooda Craigslist iyada oo aan wax dhibaato ahi jirin.
Muhiim ma aha in laga walwalo in wax xun ay dhici doonaan; kaliya ka digtoonow in wax xun dhici karaan.
Haddii xaaladu kugu adkaato, xusuusnow inaadan wax waajib ah ku ahayn inaad samayso wax aan ku dareensiinayn.
Xisaabaadka Keydinta ee Ugu Saamaynta Badan Sanadkii 2021
10 Meelood ee Ugu Wada-Shaqaynta Fiican Bangalore Sannadka 2022-ka
Ma waxaad tahay qof madax-bannaan oo ku nool Bangalore, oo raadinaya in uu haysto meel gaar ah oo aad ka geli karto oo aad…
Qiimayaasha Raadiyaha Sirius: Waa immisa Raadiyaha Sirius bishii?
Dhowr bilood ka hor, wax yar ka hor xiritaanka masiibada, adeerkay ayaa soo iibsaday baabuur cusub. Inkastoo aysan ahayn…
Waxaa jira waxyaabo badan oo ay dadku u maleynayaan inay ka dhigayaan kuraynimada mid weyn. Dhallinyarada maanta ayaa la filayaa inay tagaan…
Maxay ka dhigan tahay in la arko guumays? 15 Xaqiiqo ah oo ku saabsan Astaanta Owlka
Dhaqdhaqaaqooda habeennimo iyo muuqaalkooda gaarka ah awgeed, guumaystaha waxaa inta badan loo arkay xayawaan qarsoodi ah iyo…